I-Global ESP ye-imeyile yokuthenga ithengisa iMarket yeNjongo yezeNtlalontle
Umbono nge-imeyile uthenga iMarketer yeNjongo
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 14, 2011 NgoLwesine, uJuni 9, 2016 Douglas Karr
Sibe novuyo lokuhlangana kunye nokusebenza neenkokheli kuzo zombini ezi nkampani kunyaka ophelileyo: Umbono nge-imeyile kunye noMmiselo weNjongo. Ndixele nge-imeyile i-Email ebutsheni bonyaka kuba ndichukumisekile yile yabo kumazwe ngamazwe iinzame. Ukusetyenziswa kwabo ayisiyihlabathi liphela, kunjalo ke nangamaxesha ... yonke indlela ukuya ezantsi kubabhalisi!
Inkampani ijongene nokukhula kwama-40% kunyaka nonyaka kwaye ikhula ngokukhawuleza kwiimarike kuMzantsi Melika nase-Asiya, emva kwesabelo esikhulu sentengiso esele siseYurophu. Kunye Intengiso ye-imeyile yakhe ekunyukeni e-United States, i-imeyile ye-imeyile ikwindawo entle yokunika i-ESPs apha eUnited States imali yabo. Ayisixhasi kuphela uninzi lweelwimi zemveli kusetyenziswa ujongano lwazo, ziyabaxhasa nolawulo lweakhawunti kunye nabasebenzi beenkonzo zabathengi!
Sikwanethuba lokubona umboniso opheleleyo we Injongo yeMarketer ngokuthe ngqo kumsunguli u-Amita Paul. U-Amita yitalente emangalisayo-kwaye uyayiqonda indlela abathengisi abayisebenzisa ngayo idatha kunye noko bafuna ukukulandela. I-Marketer yeNjongo sisixhobo esisetyenziswa ziinkampani ukulungelelanisa zonke iincoko zabo kwimidiya yoluntu kunye nokulandelela ukugcwala kwabantu ngqo kwiindawo zabo. Isixhobo sendalo iphela esidityaniswa ne-Twitter, Facebook, Ping.fm… nethuba lokwenza njalo Faka iplagi nokuba yeyiphi indlela yoluntu eza kulandela. Kuyanceda ukuba uGuy Kawasaki abe lilungu lebhodi!
Kutshanje sifunde ukuba (kutsha kwakhona) Umbono we-imeyile uthenge iNqaku leMakethi! Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba intsebenziswano phakathi kwezi teknoloji igcine ntoni kwikona!
Siyavuyisana nayo yomibini le mibutho. UNick Heys kunye neqela lakhe eClichy, eFrance, ngabantu abamangalisayo kwaye inkampani yabo iyaqhubeka nokuvutha umkhondo kwesi sithuba kwilizwe liphela. Ukudibanisa le talente nombono ka-Amita kuyonwabisa ngokwenene! Ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, ndiqinisekile ukuba i-imeyile ye-imeyile inokuba ngumboneleli weenkonzo ezinkulu ze-imeyile kwiminyaka embalwa.
tags: emailumbono weimeyileiziqhulo zenickInjongo yokuthengisaImidiya yokuncokolaukubeka iliso kwimidiya yoluntu
Ii-ABC zobukho be-Intanethi
Ukuzenzekelayo ngokudibanisa kunye nokuDibanisa